सगरमाथा लाई भारतको दावि गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/सगरमाथा लाई भारतको दावि गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
नेपालबारे पटक–पटक भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गरेर विवादित बनेको भारतीय च्यानल जी न्यूजले नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबारे भ्रम फैलाउने कोसिस गरेको छ। जी न्यूजले सगरमाथा भारतको पनि भएको दाबी गर्दै विवादास्पद अभियानको घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता बजाएको अर्को दिन उक्त च्यानलले सगरमाथामा भारतीयले दावा ठोक्नु पर्ने भन्दै सामग्री प्रसारण गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिने र सगरमाथामा दावा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति एकै हुन्- जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरी।
मंगलबार प्रशारित एक कार्यक्रममा च्यानलका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगेर यस्तो अभियानको थालनी गरेको बताएका हुन्।